Viruska Dhaliya AIDSka oo Europe ku sii Fidaya.
Cudurka halista ah ee AIDSka ayaa si xoogan waxaa uu ugu faafayaa Qaaradda Yurub sida lagu sheegay warbixin dheer oo ay diyaarisay hay'ada caafimaadka aduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO.
MINNESOTA: 18 Soomaali ah ayaa Qaba Cudurka AIDS-ka Guji...
Warbixintan waxaa lagu sheegay in in ugu yaraan 2,5Million dadka ku nool qaaraddan yurub ay qabaan viruska dhaliya cudurka AIDSka , bariga qaarada yurub waxaa la ogaaday in cudurkan uu haleelay 370,000 sanadkii aynu soo dhaafnay.
Waxaana tiradan ay ka badantahay baaristii 1995 oo lagu sheegay in xiligaasi cudurkan uu ku dhacay 27,000 isla bariga qaarada Yurub. dhinaca Galbeedka qaarada Yurub ayaa waxaa WHO ay ku warantay in ay laba jibaarantay oo ay gaartay in cudurkan uu haleelo 365,000 oo xaaladood.
Dalka ingiriiska waxaa uu gaaray 20% sanadkan oo kaliya, waxaana viruska cudurkan dhaliya qaba ingiriiska 6,400 oo qof, dadka u ololeeya ka hortaga cudurkan waxaa ay muujinayaan in dhibaatada cudurkan aysan ku ekayn oo kaliya qaaradda Afrika.
waxaana sidoo kale lagu muujiyay warbixintan in inta badan dadka cudurkan uu soo haleelo ay yihiin kuwo daroogaysan ama isticmaala waxyaabaha qofka miyir doorsoonka ku rida kadibna uu ku dhaco marka uu ku dhaqaaqo fal zina ah.
Cudurkan waxaa ugu geeriyooday wadamada saboolka ah in ka badan 20 million oo qof iyadoo sanadkii ugu danbeeyayna uu ku dhacay dunida 5 million oo ruux.